Kedu otu esi esi ghọọ onye nchịkwa?
Ajụjụ banyere ụzọ isi ghọọ onye nchịkọ anaghị abụ onye na-abaghị uru, n'ihi na onye a nwere ọrụ ọ bụghị naanị n'ihi ịma mma na nhazi nke mmemme, kamakwa ahụike nke onye ọ bụla so na ya.
Kedu ihe ị chọrọ ịghọ onye nchịkwa?
Ọ bụrụ na ị kpebie iji ndụ gị nye ọzụzụ, ụzọ kachasị mma iji nweta ọrụ a bụ ịga gụ akwụkwọ site na ụlọ akwụkwọ ma ọ bụ na ọ dịkarịa ala otu kọleji nke omenala nkịtị ma ọ bụ ngalaba kwekọrọ na otu n'ime ụlọ akwụkwọ mmuta. Ọ bara uru icheta: ịchọta ụzọ ị ga - esi bụrụ onye nchịkwa, echefula na ị ga - achọ ihe ọmụma gbasara mmepụta na physiology, ọ bụ ezie na ị ga - achọ ọzụzụ dị mma. Tụkwasị na nke ahụ, a ga-achọ ihe ọmụma banyere ndị ọkà mmụta sayensị mmadụ, ebe ọ bụ na ị ga-arụ ọrụ na ndị mmadụ.
Ihe choro maka onye nkuzi
Ọ bụrụ na ị maghị ihe ịkwesịrị ịghọ onye na-ahụ maka nlekọta ahụike, ọ bụ ihe ezi uche dị na ya ịdị ka gị onwe gị maka ọrụ ndị dị otú ahụ. N'ebe ahụ, ọ bụghị naanị na ị ga-enwe ike inyocha usoro nke omume ha, kamakwa ịgbaso ụzọ omume onye nkụzi na ịmatakwu ihe ndị achọrọ ya:
onye na-enye ọzụzụ ga-enwerịrị mmụta mmụta (nke dị elu, nke abụọ ma ọ bụ ma ọ dịkarịa ala nkwadebe mmemme, nke, n'ezie, abaghị uru);
izute ihe gbasara ahụike;
nwee ike ikwurịta okwu na ndị ahịa: ịrụ ọrụ na otu ìgwè, echefula banyere onye ọ bụla. Jide n'aka na ị bụ onye ziri ezi na ịdọ aka ná ntị;
jiri nlezianya akwadebe maka klas. Olu nke ibu n'oge ọzụzụ kwesịrị ikwekọ na afọ na ahụike nke ndị ahịa. Otu ihe a chọrọ maka ndị na-akọwa otú ị ga-esi bụrụ onye nchịkwa na mgbatị ahụ;
naanị onye na-arụ ọrụ mgbe nile na nkà ọkachamara ya na mmelite onwe ya nwere ike ịghọ ezi nchịkwa.
N'oge na-adịbeghị anya, ọ dịwo mfe ịkọwa ma ọ ga-ekwe omume ịmalite ịmalite ọrụ "site na ncha". Ọ bụ ya mere ajụjụ a na - ejikarị etu esi ghọọ onye na - enye ọzụzụ na - ahụ maka ahụike ka ọ bụrụ nwata. Na-ekwu okwu n'eziokwu, n'ụzọ ọ bụla, ebe ọ bụ na ọ dị mkpa itinye ego, oge na ihe nkwụnye ego, nke na-enye anyị ohere ịmara ọkachamara, ọbụna na ọkwa mbụ.
Foto nwanyi nwanyi
Mgbalị nke ndị ọrụ
Ebee ka agae arụ ọrụ?
Ọrụ ụlọ maka ụmụ nwanyị
Kedu otu esi mepee ụzọ ego ma na-adọta ezigbo mma?
Ịgbahapụ na ịkpa ókè ego - uru na nkwenye
Kedu ka esi mee ka nrụgide nrụgide dịkwuo elu
Ọrụ Maka Ụmụ nwanyị Mba Ọzọ
Uwe ejiji maka Summer 2016
Ncha maka ịsa ala
Panoramic glazing nke balconies
Ejiji ejiji na uwe - iwu nke ịmepụta ihe oyiyi
Ikike na ọrụ nke onye mmụta
Winter jaket 2016
Tomato maka griin haus nke polycarbonate bu ihe kachasi nma ichota
Kedu ka osikapa si eto?
Myoma nke akpanwa - akụkụ maka ọrụ na millimeters
Kedu ihe ga-enye nwata site na ụkwara?
Kukumba - ọma na ihe ọjọọ
A otu na ụdị nke 90 si
Ogologo pyelonephritis oge - mgbaàmà
Nchịkọta nke mgbede Uwe 2014
Pastel agba na uwe
Cristiano Ronaldo mere nkedo maka ọrụ nwanyi nke obi
Ejiji ụmụ nwanyị mara mma
Strawberry mousse - uzommeputa
Mwepụ nke adenoids na ụmụaka